Su'aalaha la isweydiiyo - ZHONGHUI WAXGARADKA CILMIGA (JINAN) CO, LTD
Mashiinnada Dheelitirka Fir-fircoon, Jilicsan-ka-soo-horjeeda vs-adkaysiga
Mashiinnada isu-dheellitirka laba diyaaradood, ama mashiinnada dheelitirka firfircoon, ayaa loo adeegsadaa hagaajinta isu dheelitir la'aanta taagan iyo firfircoonida. Labada nooc ee guud ee mashiinnada dheelitirka firfircoon ee helay aqbalaadda ugu ballaadhan ayaa ah mashiinka dhalista “jilicsan” ama dabacsan iyo mashiinka “adag” ama adag. In kasta oo runtii aysan jirin wax farqi ah oo u dhexeeya qoryaha la adeegsaday, mishiinnadu waxay leeyihiin noocyo ganaax oo kala duwan.
Mashiinnada Dheelitirka Maskaxda jilicsan
Mashiinka jilicsan ee magaciisu wuxuu magaciisa ka soo qaatay xaqiiqda ah inay taageerto rotor-ka si loogu dheellitiro wax-qabadyada xorta u ah inay u dhaqaaqaan ugu yaraan hal jiho, badiyaa si siman ama si toos ah ugu jeeda dhidibka rotor-ka. Aragtida ka dambaysa qaabkan dheelitirka ayaa ah in rotor-ku u dhaqmo sidii haddii la hakiyay hawada dhexdeeda iyadoo dhaqdhaqaaqa rotor-ka la cabirayo. Naqshadaynta farsamada ee mashiinka jilicsan ayaa xoogaa ka sii adag, laakiin qalabka elektaroonigga ah ee ku lug leh ayaa aad u fudud marka la barbar dhigo mashiinnada adkaanta leh. Naqshadaynta mashiinka dheelitirka jilicsan ayaa u oggolaanaya in meel kasta la dhigo, maadaama taageerooyinka shaqada dabacsan ay bixiyaan go'doomin dabiici ah oo ka timaadda hawlaha u dhow. Tani waxay sidoo kale u oggolaaneysaa mashiinka in la dhaqaajiyo iyada oo aan saameyn ku yeelan cabbirka aaladda, si ka duwan mashiinnada adkaanta leh.
Resonance-ka rotor-ka iyo nidaamka dhalidda wuxuu ku dhacaa nus ama ka yar xawaaraha dheelitirka ugu hooseeya. Isku dheelitirnaanta waxaa lagu sameeyaa si joogta ah oo ka sarreysa inta soo noqnoqda ee hakinta.
Ka sokow xaqiiqda ah in mashiinka dheelitirka jilicsanaanta jilicsan yahay mid la qaadan karo, waxay bixisaa faa'iidooyinka dheeraadka ah ee lahaanshaha xasaasiyad ka sarreeya mashiinnada adkaanta leh ee xawaaraha dheelitirka hoose; mashiinnada adkaysi leh ayaa cabbira xoogga oo sida caadiga ah u baahan xawaare dheellitiran oo sarreeya. Faa'iido dheeri ah ayaa ah in mashiinnadayada jilicsan-jilicsan ay cabbiraan oo muujiyaan dhaqdhaqaaqa dhabta ah ama barakicinta rotor-ka inta uu wareejinayo taas oo bixisa qaab dhismeed oo lagu ansixinayo xaqiiqda ah in mashiinku si habboon uga jawaabayo iyo rotor-ku si sax ah isu dheeli tiran yahay.
Faa'iidada ugu weyn ee mashiinnada jilicsanaanta leh ayaa ah inay u muuqdaan kuwo aad u badan. Waxay ku xamili karaan culeysyo badan oo rotor ah hal cabbir mashiin. Looma baahna aasaas gaar ah oo loogu talagalay dahaarka iyo mashiinka waa la dhaqaajin karaa iyada oo aan laga helin dib-u-habayn khabiir.
Mashiinnada dheelitirka jilicsan, sida mashiinnada dhalada adag, waxay dheellitiri karaan inta badan rotors-ka jihaysan. Si kastaba ha ahaatee, isu-dheellitirka rotor-ka xad-dhaafka ah wuxuu u baahan yahay adeegsiga cillad taban oo hoos u haysa.
Sawirka kore wuxuu muujinayaa mashiinka dheelitirka jilicsan ee jilicsan. Fiiro u yeelo in jihaynta nidaamka sita ay u oggolaanayso in sundulumku uu hore iyo gadaal ugu lulmo rotor -ka. Barakaca waxaa duubay dareeraha gariirka dabadeedna waxaa loo isticmaalay in lagu xisaabiyo meesha aan dheelitirnayn.
Mashiinnada Dheelitirka ee Dhalmada adag
Mashiinnada dheelitirka ee adkaysiga leh waxay leeyihiin taageero shaqo oo adag waxayna ku tiirsan yihiin elektiroonig casri ah si ay u fasiraan gariirka. Tani waxay u baahan tahay aasaas weyn oo adag oo ay tahay in si joogto ah loo dejiyo oo loo habeeyo meesha soo -saaraha. Aragtida ka dambaysa nidaamkan dheelitirka ayaa ah in rotor -ku uu si buuxda u xaddidan yahay oo xoogga rotor -ku geliyo taageerooyinka la cabbiro. Gariirka asalka ah ee ka yimaada mashiinnada ku dhow ama dhaqdhaqaaqa dabaqa shaqada ayaa saamayn kara natiijooyinka dheelitirka. Caadi ahaan, mashiinnada adkaanta leh ayaa loo adeegsadaa wax-soo-saarka wax-soo-saarka halkaas oo loo baahan yahay waqti wareeg degdeg ah.
Faa'iidada ugu weyn ee mashiinnada adkaysiga leh ayaa ah inay u muuqdaan inay bixiyaan akhrin aan dheelitirnayn oo degdeg ah, taas oo waxtar u leh dheelitirka wax-soo-saarka xawaaraha sare.
Qodobka xaddidaya mashiinnada adkaanta leh ayaa ah xawaaraha dheelitirka loo baahan yahay ee rotor inta lagu jiro tijaabada. Sababtoo ah mashiinku wuxuu cabbiraa awoodda dheelitir la'aanta ee rotor -ka wareega, rotor -ka waa in lagu wareejiyaa xawaare sare si loo abuuro xoog ku filan oo lagu ogaan karo ganaaxyada adag.
Iyada oo aan loo eegin mishiinka dheelitirka jiifka ee la isticmaalay, falanqaynta karbaashka ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto marka la dheelitirayo duubyo dhaadheer oo dhuuban, ama rotors kale oo dabacsan. Karbaashku waa cabbiraadda cilladda ama leexinta rotor dabacsan. Haddii aad ka shakisan tahay inaad u baahan tahay inaad cabirto karbaashka, ka hubso taageeradayada farsamo waxaanan go'aamin doonaa haddii tilmaame karbaash uu lagama maarmaan u yahay codsigaaga.
Isbarbar dhigyada Granite Precision, Sax Granite, La taaban karo Epoxy, Sax Granite Cube, Sax Granite dusha sare, Qalinka Granit Square Ruler,